Koox Budhcad Ugaadheed Ah Oo Gacanta Lagu Dhigay Iyaga Oo Dhoofinaya Ku Dhawaad 70 Xabo Oo Diin Ah | FooreNews
Home wararka Koox Budhcad Ugaadheed Ah Oo Gacanta Lagu Dhigay Iyaga Oo Dhoofinaya Ku Dhawaad 70 Xabo Oo Diin Ah
Koox Budhcad Ugaadheed Ah Oo Gacanta Lagu Dhigay Iyaga Oo Dhoofinaya Ku Dhawaad 70 Xabo Oo Diin Ah
fooreDec 26, 2011wararka0
Boorama (Foore)- Ciidanka Booliska Somaliland ee gobolka Awdal ayaa gacanta ku soo dhigay saddex qof oo sifo sharci darro ah dalka uga ugaadhsanayay Diin fara badan oo ay doonayeen in ay u dhoofiyaan dalalka dibada. Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku soo dhigay kooxdan oo falkan loo xidhay saddex qof oo ka mid ah kuwo kalena lagu daba jiro sida uu warbaahinta u caddeeyey taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal oo xaqiijiyay in ciidamada ammaanku hawl gal ku soo qabqabteen dad ugaadhsanayay Diinka oo wakhtigaasi ku sugnaa deegaanka Cali Xaydh ee degmada Baki. Ciidanka ayaa gacanta ku soo dhigay gaadhi sida ku dhawaad 70 xabbo oo Diin ah.
Taliyaha ayaa sheegay in ciidamadu maalmihii ugu dambeeyey ku hawlanaayeen sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen dad la sheegay in ay sifo xaaraan ah uga ugaadhsadaan goobo ka mid ah gobolka Awdal ugaadh kala duwan oo si qarsoodi ah loo dhoofiyo gaar ahaan dhinaca bari ee gobolka Awdal, koox ka mid ah kuwaasina ay gacanta ku dhigeen sida ugu dhakhsaha badana ay sharcigana ula tiigsan doonaan.
Taliyaha oo arrintaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Sida aad ka war qabtaan ee aad maqasheen. Muddo 48 saacaadood ah waxaanu hawl gal ugu maqnayn goobo ka mid ah bariga Gobolka Awdal, gaar ahaan jiidda Cali Xaydh. Hawlgalkayagu marka hore waxa uu u badnaa mid nabad gelyo, markii dambase waxaanu ka war helay in Ugaadh koontarabaan ah jiidaasi la doonayo in laga dhoofiyo. Waxaanu gacanta ku dhignay baabuur aad halkan ku arki kartaan oo siday dhawr iyo lixdan xabo oo Diin ah”. Taliyaha qaybta Booliska ee gobolka Awdal waxa uu sheegay in falkan ciidanku u qabteen saddex nin oo reer Awdal ah, kadibna uu isagu toos u tagay goobtii lagu qabtay oo ahayd Cali Xaydh. Isaga oo arrintaasi faahfaahin ka bixinaya waxa uu yidhi: “Markii Ciidanka boolisku gacanta Ku dhigeen ayaan tagay goobtaasi. Waan soo qabanay waanan xeraynay. Waxa jira dad badan oo hawlo noocan oo kale ah ku hawlan ugaadhsina ku wada xayawaano kale oo uu ka mid yahay Harimacadka iyo Shabeelku. Kuwaasi ayaad farriin naga gaadhsiinaysaan, in aanu soo qaban doono sharcigana marin doono” Taliyaha booliska ayaa sheegay in uu farriin u dirayo cid kasta oo arrimo noocan oo kale ah faraha kula jirta isaga oo ugu baaqay in ay ka waantoobaan , ciddii lagu soo qabtana tallaabo adag oo sharciga waafaqsan laga qaadi doono.
Kormeer ay dhawaan kooxo deegaan jirayaal ahi ku soo mareen xeebaha woqooyi galbeed ee Somaliland ayay kaga dayriyeen xaaladda ay ku sugan tahay ugaadha Somaliland. Kooxo shabakado ah oo isugu xidhan hab qarsoodi ah ayaa min Jabuuti, Somaliland ilaa Yemen isaga kala goosha oo si qarsoodi ah u daabula Ugaadha ay dhoofiyaan iyaga oo adeegsanaya muwaadiniin ku sugan deegaamada miyiga ah ee Ugaadha laga soo qabto. Diinka ayaa suuq ballaadan ku leh dalalka carabta, halka Harimacadka, Deerada iyo Cawshu ka mid yihiin Ugaadha sida ba’an loo bartilmaameedsado.
Deegaamada galbeedka iyo woqooyiga Somaliland ayay muddo badan hawlo noocan oo kale ahi si qarsoodi ah uga socdeen waxaana la sheegaa in ugaadhsi baaxad leh lagu hayo ugaadha noocyadeeda kala duwan oo sida kaleba dalka gabaabsi ugu jirta. Ugaadhsiga sharci darrada ah ee lagu hayo xayawaanka duur-joogta ah ayaa maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya iyada oo aanay jirin qorshe cad oo xukuumaddu arrintaasi wax kaga qabanayso.
Previous PostAbiib Timacad Oo Sheegay In Xukuumaddu Gacanta Ku Soo Dhigi Doonto Cadaaladdana Marin Doonto Cid Kasta Oo Ka Dambaysay Falkii Seemaal Next PostMadaxweyne Ku Xigeenka Somaliland Oo Xadhiga Ka Jaray Mashaariic Laga Hirgeliyay Gabiley